Yakanakisa GJCNC-BMA Mugadziri uye Fekitori | Gaoji
1. Max Busbar Saizi: 15 * 140 mm
2. Min Busbar Saizi: 3 * 30 * 110 mm
4. Min Dhayamita ye Ballscrew: -32 mm
5. Chikamu cheBallscrew: 10mm
CNC busbar yekugaya muchina inonyanya kushanda mukugaya fillet uye hombe fillet mubusbar. Iyo inogadzira otomatiki kodhi yechirongwa uye inoendesa kodhi kune michina ichivakira pane izvo zvinodiwa pabarbar kutsanangurwa uye iyo data yekuisa pane yekuratidzira skrini. Zviri nyore kushanda uye kunogona muchina unobatsira busbar arc nekutaridzika kwakanaka.
Muchina uyu unoshandiswa kuita chikamu chema arc machining emabhasi emisoro ine H≤3-15mm, w≤140mm uye L≥280mm.
Musoro webhawa uchagadzirwa muchimiro neyakagadziriswa mamiriro.
Iwo anosunga anotora otomatiki ekuisa tekinoroji kumanikidza iwo wekutsikirira musoro zvirinani kune simba rinotakura poindi.
Iyo booster inoshandiswa pamusoro wekutsikirira musoro kuchengetedza kugadzikana kweiyo workpiece, ichipa iri nani machining pamusoro pemhedzisiro.
Pasi rose BT40 chigadziri chekushandisa chinoshandiswa kuti zvive nyore kushandiswa kwekutsvaira, kusimba kwakanaka uye kunyatsonaka.
Muchina uyu unotora yakakwira-chaiyo bhora screws uye mutsara mitsara. Heavy-mutoro wakakura-saizi giraidhi njanji dzakasarudzwa kuti dzipe zviri nani kuomarara kwemuchina wese, kudzikisira kudedera uye ruzha, kuvandudza mhando yeiyo workpiece uye kuve nechokwadi chakanyanya kurongeka uye kugona.
Uchishandisa zvinhu zvemumba uye zvepasirese zvigadzirwa zvinozivikanwa, muchina uyu ndewehupenyu hwakareba hwebasa uye unogona kuvimbisa mhando yepamusoro.
Iyo chirongwa chinoshandiswa mumuchina uyu ndiyo yakadzamidzirwa otomatiki grafiti yekugadzira software yakagadzirwa nekambani yedu, ichiziva iyo otomatiki muchirongwa. Anoshanda haafanire kunzwisisa dzakasiyana siyana kodhi, uye haafanire kuziva mashandisiro echinyakare machining nzvimbo. Anoshanda anongofanirwa kuisa akati wandei parameter nekureva iwo maficha, uye iyo michina inozozvimisikidza iyo yega makodhi emuchina. Zvinotora nguva ipfupi pane manyorerwo epurogiramu uye inobvisa kugona kwekodhi kodhi kunokonzerwa nehurongwa hwemanyorerwo.
Busbar yakagadziriswa mumuchina uyu ndeyekutaridzika kwakanaka, isina kuburitsa poindi, kudzikisira saizi yekabineti kuchengetedza nzvimbo uye nekudzikisira zvinoshamisa kudyiwa kwemhangura.
Pashure: CNC Bhazi Dhivha Flaring Machine GJCNC-BD
Divi (mm) Kurema (kg) Kushanda Tafura Saizi (mm) Kunobva Mhepo (Mpa) Yakazara Simba (kw)
Moter Simba (kw) 7.5 Servo Simba (kw) 2 * 1.3 Max Torpue (Nm) 62
Chishandiso Chekubata Model BT40 Danho dhayamita (mm) 100 Kumhanya kwekuti chokurukisa (RPM) 1000
Upamhi hwezvinhu (mm) 30 ~ 140 Min Chinyorwa Kureba (mm) 110 Material ukobvu (mm) 3 ~ 15
X-Sekaiichi Stoke (mm) 250 Y-Sekaiichi Stoke (mm) 350 Kurumidza Position Speed ​​(mm / min) 1500
Chikamu cheBallscrew (mm) 10 Chinzvimbo Akarurama (mm) 0.03 Kudya Kwekumhanyisa (mm / min) 1200